Xiaomi Mi 8 SE: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Xiaomi Mi 8 SE: Ny eo afovoany entanin'ny avo lenta
Eder Ferreno | | Finday, Xiaomi
Tamin'ity herinandro ity ihany dia tafaporitsaka ny tahirin-kevitra voalohany momba ny Xiaomi Mi 8 SE, telefaona antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa, aingam-panahy avy amin'ny haitao avo lenta amin'ity taona ity. Karazana kinova maotina kokoa an'ny avo lenta, izay tsy fantatra na tena izy na tsia. Saingy naseho tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity hetsika ity an'ny marika sinoa. Ka efa fantatsika daholo ny momba ny telefaona.
Araka ny anarany, ity Xiaomi Mi 8 SE dia fitaovana entanin'ny aingam-panahy amin'ity taona ity, fa mamela antsika amin'ny famaritana tsotra kokoa. Safidy tsara ho an'ireo mpampiasa mitady fitaovana kalitao amin'ny vidiny ambany.
Ny telefaona no voalohany amin'ny fianakaviana vaovao ho an'i Xiaomi, ka mety ho lasa fahazarana. Ity dia tsy fantatsika amin'izao fotoana izao, ho fanampin'izay, izy no voalohany mampiasa ny processeur vaovao Qualcomm. Izahay dia mamela anao voalohany amin'ny famaritana ny telefaona:
1 Famaritana Xiaomi Mi 8 SE
2 Vidiny sy misy
Famaritana Xiaomi Mi 8 SE
Famolavolana, miaraka amin'ny fisian'io notch io dia mazava tsara fa manome aingam-panahy avy amin'ny Xiaomi Mi 8 naroso ihany koa tamin'ny hetsika. Na dia mamela antsika hanana toetra teknika maotina kokoa sy tsy dia mahavariana kokoa aza io maodely io noho ilay maodely teo aloha. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
efijery: OLED 5.88-inch miaraka amin'ny tahan'ny 19: 9 sy ny vahaolana FullHD + (2280 x 1080)
processeur: Qualcomm snapdragon 710
Fitahirizana anatiny: 64 GB
Fakan-tsary Rear: MP 12 + 5
Fakan-tsary aloha: MP 20
bateria: 3120 mAh
Rafitra fandidiana: Android 8.1 Oreo miaraka amin'ny MIUI 10 ho toy ny sosona fanaingoana
ny hafa: sensor fantsom-tànana, famohana ny tarehy, karazana USB C, NFC, Bluetooth ...
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa nahazo aingam-panahy izy ireo ary naka toetra vitsivitsy hitantsika teo amin'ny toerana avo. ATSINANANA Xiaomi Mi 8 SE koa dia hanana sensor sy ny fanalana tarehy ny dian-tànana. Toetra roa izay mahazo eo amin'ny tsena.
Ary lasa koa ny telefaona amin'ny voalohany eny an-tsena hampiasa ny processeur Snapdragon 710. Ity no fianakaviana vaovao an'ny processeur Qualcomm, natao ho an'ny sokajy antonony. Ka somary ambany kokoa noho ny elanelam-potoana 800 izy ireo fa tsara kokoa noho ny 600. Andrasana araka izany ny fahombiazana tsara, ary koa ny fihenan'ny herinaratra.
Ny Xiaomi Mi 8 SE dia nisafidy ny notch, na dia hitantsika aza amin'ity modely ity ny efijery maka endrika mahitsizoro kokoa. Hafa ny famolavolana, na dia miloka fefy manify amin'ny fotoana rehetra aza ianao. Tsy misy tsy ampoizina amin'ity lafiny ity. Mandritra ny aoriana dia misy fakan-tsary roa miandry antsika.
Vidiny sy misy
Io fitaovana io atolotra ho telefaona misy fampiasa tsara amin'ny vidiny mihena. Tsy isalasalana fa izany no lakileny, manome antsika fahombiazana tsara, fisehoan-javatra mahery vaika eo afovoany, ary manana vidiny mora azo. Safidy tsara ho an'ireo mpampiasa tsy maniry na afaka mividy ny avo lenta. Ka mety ho telefaona mivarotra izany.
Mahita kinova roa amin'ity Xiaomi Mi 8 SE ity izahay amin'ny resaka RAM sy fitehirizana anatiny, na dia RAM aza no tena mahasamihafa azy roa. Manana kinova miaraka amin'ny 4/64 GB izahay ary ny iray hafa manana 6/64 GB. Ka ny mpampiasa dia afaka misafidy izay heveriny fa mety indrindra ho azy ireo.
Raha ny vidiny, ny kinovan'ny telefaona misy 4/64 GB dia vidiana amin'ny 1.799 yuan, izay amin'ny fanovana dia sahabo ho 240 euro. Mety ho somary avo kokoa ny vidiny rehefa tonga any Eropa ny fitaovana, izay heverintsika fa ho avy.
Etsy ankilany manana ny kinova miaraka amin'ny 6/64 GB izahay, izay amin'ity tranga ity dia somary lafo kokoa, satria ny vidiny dia 1.999 yuan. Amin'ny fanovana eo amin'ny 265 Euros eo ho eo izy ireo. Averina indray fa antenaina ho somary avo kokoa ny vidiny amin'ny fandefasana azy any Eropa.
Hatreto mbola tsy fantatra hoe rahoviana no ho tonga ao amin'ny magazay ity Xiaomi Mi 8 SE ity. Tsy naneho hevitra momba izany ny orinasa tamin'io hetsika io. Na dia tokony ho afaka hahafantatra izany vaovao izany tsy ho ela aza isika. Ahoana ny hevitrao momba an'io antonony io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi 8 SE: Ny eo afovoany entanin'ny avo lenta
Xiaomi Mi Band 3: Ofisialy vaovao amin'ny braseleety izao dia ofisialy
MIUI 10: Ny sosona fanaingoana vaovao an'i Xiaomi dia eto